मिर्चैयामा मेरो जति योगदान कुनै उम्मेदवारको छैन, यसपालि जनताले मलाई जिताउँदैछन् ःरामप्रताप साह (भोला) - मनकामनापोष्ट
Written by मनकामनापोष्ट•	May 4, 2022• 3:52 am• ताजा अपडेट, मधेस प्रदेश, राजनीति, राष्ट्रिय
मिर्चैयामा मेरो जति योगदान कुनै उम्मेदवारको छैन, यसपालि जनताले मलाई जिताउँदैछन् ःरामप्रताप साह (भोला)
सिरहा,बैशाख २१ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तराई मधेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका मिर्चैया क्षेत्रका अनूभवि नेता रामप्रताप साह (भोला) मिर्चैया नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार हुन् । उनी लामो समयदेखि यहाँको सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छन् । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा समेत उनी मिर्चैयामा मेयरको उम्मेदवार बनेका थिए । तर, पराजित भएपनि मत भने राम्रै ल्याए । यो पाँच वर्षको अवधिमा उनले नगरपालिकामा चुनाव जित्न आफ्नो पकडलाई थप मजबुत बनाएका छन् । त्यसैले उनी यसपालिको निर्वाचनमा यहाँका मतदाताले आफूलाई विजयी गराउने विश्वाससहित मेयरमा उम्मेदवारी दिएर फेरि चुनावी मैदानमा छन् । हामीले उनीसँग चुनावी संवाद गरेका छौं, प्रस्तुत छ।
मिर्चैया नगरपालिकाका मतदाताले तपाईंलाई नै किन भोट दिने ?
मिर्चैयावासीले मलाई भोट दिनुको कारण छ । किनभने म आफूलाई यो समाजलाई नै समर्पित गरिदिएको छु । यहाँको समस्याको बारेमा बुझेको छु । र, एउटा भिजनका साथ अगाडि बढिरहेको छु । कुनै पनि कलंक लागेको छैन । र, यो नगरपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर स्पष्ट धारणा बोकेको छु । सबै मतदाताले त्यो कुरा बुझेर मलाई मतदान गर्नेछन् भन्नेमा विश्वस्त छु ।
तपाईंले चुनाव जित्ने आधार के–के हुन् ?
दशकौंदेखि जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छु । जनतामाझ भिजेको पनि छु । अहोरात्र जनताकै काममा खटिरहेको हुन्छु । यहाँ थुप्रै उम्मेदवार छन् । तर, सबैभन्दा बढी यस क्षेत्रमा मेरो योगदान छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । मैले चुनाव जित्ने आधार भनेको यही नै हो ।
मिर्चैया नगरपािलकाका लागि तपाईंका एजेन्डा के–के हुन् ?
योजनाहरू छन्, जसलाई हामीले लागू गर्छौं । मिर्चैया यहाँको पुरानो ठाउँ हो । यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि बस्तीहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेका छैनन् । यहाँको समस्या भनेको साँघुरा र जीर्ण बाटो अनि गल्लीहरू छन् । हामीले यो समस्याहरु व्यवस्थित ढंगले समाधान गर्छौं । अर्कोतर्फ, मिर्चैया नगरको स्थास्थ्य संस्थाहरु कामका छैनन् । मैले मिर्चैयालाई सबै स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित बनाएर सबै जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिने खालको बनाउँछु ।
मिर्चैयामा शिक्षाको स्तर खस्किएको अवस्था छ । शिक्षा मेरो मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछ । शिक्षाका मापदण्ड र समयअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने योजना छ । कृषि क्षेत्र पनि धरासायी बनेको छ । कृषि क्षेत्र पनि मेरो मुख्य प्राथमिकतामा रहनेछन् । व्यापारी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि काम गर्नेछु । यसैगरी, कर व्यवस्थापनको लागि पनि कदम चालिनेछ । मिर्चैया नगरपालिकालाई फोहोर मैलारहित नगरपालिका बनाउन काम गर्नेछु ।
महिलालक्षित तपाईंका योजनाहरू के छन् ?
महिलालक्षित योजनाहरू पनि छन् । उहाँहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षामा जोड दिएर सुनौलो भविष्य निर्माणका लागि अग्रसर गराउनेछौं ।
चुनावमा तपाईंका विपक्षीहरू बलिया वा कमजोर के छन् भन्ने लाग्छ ?
त्यो म भन्दिनँ । को कस्ता छन् भन्ने कुरा जनतालाई राम्ररी थाहा छ । यसको जवाफ जनताले ब्यालेट मार्फत् दिनेछन् । र, जनताले मेरो सपना पूरा गर्नेमा म ढुक्क छु । यसपालि जनताले नगरपालिकामा रुपान्तरणका लागि मलाई जिताउँदैछन् ।